FARITRA SAVA : Tsy nahitana soritr’aretina coronavirus ireo olona 24 tonga avy any ivelany
Olona miisa 26 no narahi-maso akaiky sy noahiahiana ho mitondra ny valanaretina coronavirus tao amin’ny Faritra Sava. 6 avril 2020
Ny 24 tamin’ireo dia teratany malagasy sy teratany vahiny, nipetraka tany ivelany avokoa. Raha ny tatitra nataon’ny Governoran’ny Faritra Sava, Tokely Justin dia misy amin’izy ireo no avy any Frantsa, Dobay, La Réunion, Maurice ary Koweit. Ny iray kosa dia teto Madagasikara ihany saingy tonga avy any Antananarivo no sady nifanosona akaiky tamin’ny olona tany ka nandraisana fepetra tahaka iretsy ambony. Avy hatrany dia notilina moa ireto olona ireto rehefa avy natoka-monina nandritra ny 14 andro. Voamarina taorian’izay fa tsy misy tratran’ity aretina ity izy ireo.
Na teo aza anefa izany, nanentana ny mponina ao amin’ity Faritra ity ho mailo hatrany ny Governora. Nambarany fa mbola mitohy ny fikarohana atao amin’ireo olona niditra tato amin’ny Faritra tamin’ny vanim-potoana nahatongavan’ny valanaretina teto Madagasikara. Izany no natao, hoy izy, dia mba ho fiarovana ilay olona mitondra ny tsimokaretina sy ho fiarovana ireo hafa miara-mitakosona aminy nefa tsy manam-po na inona na inona akory.
Nanipika koa ity Governora ity fa sarotra kokoa ny mifehy ny valanaretina raha toa ka vokatry ny fifampikasohana tamin’ny olona efa mitondra ny valanaretina no ifindran’izany amin’ny hafa. "Aoka samy mbola hitandrina mafy isika, tokony hanaraka hatrany ny fepetra izay misy sy napetraky ny Fitondram-panjakana hiarovan-tena sy hiarovana ny hafa", hoy ny Governoran’ny Faritra Sava, Tokely Justin. Tsara fiomanana amin’ny fiatrehana ity valanaretina ity ny Faritra Sava. Notokanana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo koa mantsy ny tranobe handraisana ireo marary mitondra ny otrikaretina coronavirus, raha sanatria ka tafiditra any an-toerana izany.